I-Humboldt yeFama yeCannabis Studio
Ifama sinombuki zindwendwe onguMichaela
Yiza ukonwabele amava okwenyani e-Humboldt County kwaye uhlale nathi kwifama yethu enoxolo nephangaleleyo ye-cannabis. Jonga ubuhle obuphuphumayo kule ndawo ikhethekileyo yehlabathi. Iilwandle zikaHumboldt, iintaba, imilambo kunye ne-resinous buds zikulindile. Instagram @ValkyrieFarm
Sinikezela ngeesampulu zasimahla ngokuhlala ngakunye.
Ukhenketho lwethu lokufundisa alubonelelwa ngeenyanga zikaNovemba-Februwari.
ICannabis inobubele. Akukho kutshaya ngaphakathi.
Asilwamkeli ubhukisho olwenziwa phantsi kweakhawunti yomnye umntu.
Esi situdiyo sithe cwaka sibekwe kwifama yethu ephangaleleyo ye-cannabis, ijikelezwe luhlaza, indawo evulekileyo, kunye neendawo eziluhlaza zentsangu. Indawo yokuhlala ibekwe kwiNtlambo yaseCreshwater Creek, ejikelezwe lihlathi elishinyeneyo laseRedwood.
Sinikezela ngokhenketho lwasimahla, olunolwazi lwefama ngokuhlala rhoqo ngexesha lokukhula. Ukhenketho lubandakanya ukuhambahamba kwiindawo zokugcina izityalo, i-nursery, igumbi lokusasaza, kunye neshedi yokomisa, nokunye. U-Emilio, umkhokeli wabakhenkethi, uya kuchaza inkqubo yokulima kunye nembali emfutshane kunye namabali amnandi malunga nenkcubeko ye-cannabis yaseHumboldt.
Istudiyo sinekhitshi eligcweleyo, elinesitovu, ioveni kunye nefriji enkulu kunye nezinto zokupheka ezisisiseko. Kukho ibhedi etofo-tofo, entsha ye-queen size, kunye nesofa esongwayo ibe yindawo yokulala elingana namawele.
Senze ibhafu yokufunxa ngamaplanga yangaphandle elingana kakuhle nezimbini. Kukho iimpompo zamanzi ashushu nabandayo ebhafini, kwaye ungabasa umlilo omncinci kwisitovu sezitena ukuze ugcine amanzi ngenene, eshushu kakhulu kwaye wongeze kwi-ambience. Imiyalelo yokusebenza inikezelwe.
Le yifama esebenzayo oku kuthetha ukuba kuya kubakho inqanaba elithile lomsebenzi kunye nengxolo kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Sikwanazo nezinja kwipropathi ezinobuhlobo kwaye ziya kufuna ukudibana nawe.
Indawo engaphandle kwangoko nakufutshane nerenti yeyakho ukuba uyisebenzise kwaye uyonwabele. Ukuba unqwenela ukubona ngakumbi ifama, siyakuvuyela ukukunika ukhenketho olukhokelweyo! Thumela nje umyalezo okanye ufowunele ukwenza amalungiselelo.
Njengoko eli ilishishini kunye nendawo yokuhlala, asizivumeli iindwendwe zethu ukuba zizulazule ngokukhululekileyo ezigadini nakwizakhiwo.
Akukho kutshaya ngaphakathi kwa-Airbnb.
Sikwindawo encinci yasemaphandleni ebizwa ngokuba yi-Freshwater eyi-10min ukusuka e-Eureka nase-Arcata, eCalifornia.
Ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo, iimfuno okanye iinkxalabo. Kusoloko kukho umntu okwisiza onokunceda ngayo nayiphi na imiba.